बाङ्गोटिङ्गो दाँतले चिन्तित हुनुहुन्छ ? डाक्टर भन्छन्, 'जिब्रोले नै मिलाउन सकिन्छ' (भिडियाे)
मुख शरीरको प्रमुख द्वार हो । राम्रा र नराम्रा दुवै कुरा मुख हुँदै शरीरमा पुग्छन् । त्यसैले शरीर र मुखको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ । अर्थात्, शरीरलाई स्वस्थ राख्ने र रोगी हुने, यो कुरा धेरै हदसम्म मुख र दाँतको सफाइमा पनि निर्भर रहन्छ । त्यसैले मुखको सफाइमा कुनै कमी हुन दिन हुँदैन । यसै सन्दर्भमा हामीले दन्तराेग विशेषज्ञ डा. सुवास घिमिरेसँग दन्त स्वास्थ्यबारे केही जिज्ञासा राखेका छौँ । उनको भनाइको मूल सार यहाँ पढ्नुहोस् । पूरा जानकारीसहितको भिडियो यसै तल राखिएको छ ।
– नेपालमा खासगरी मुख गन्हाउने, गिजाबाट रगत आउने, दाँतको सडनका पीडितहरू ज्यादा छन् ।
– दाँत सफा गर्न जानिएन भने पनि समस्या आइपर्छ । कतिपयले एक ठाउँ वा दुई ठाउँ अर्थात् मुखको तल्लो भाग वा माथिल्लो भागमा मात्रै ब्रस गर्छन् । तर, दाँतका पाँचवटा भाग नै सफा गर्नुपर्छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै र राति सुत्नुअघि ब्रस गर्नुपर्छ । रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका वा कुनै रोगका पीडितहरूको हकमा भने बिहान उठ्नेबित्तिकै र खाना खाएलगत्तै ब्रस गर्नुपर्छ ।
– मञ्जनले किटाणु मार्छ भन्ने कुरा पूर्ण सत्य होइन । मुख र दाँतका किटाणु मार्ने एन्टी ब्याक्टेरियल प्रपर्टी त हाम्रो थुकमै हुन्छ । विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक पेस्टहरू प्रयोग गर्न हुँदैन । मञ्जन त मज्जाका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ ।
– खानेकुरा आफैँमा ब्रस हो । शरीर आफैँ औषधि हो ।
– अर्ग्यानिक खानेकुरा खानुपर्छ ।
- तपाईंको दाँत बाङ्गोटिङ्गो छ भने यसलाई तपाईंले नै मिलाउन सक्नुहुन्छ । बिहानीपख मानिसका दाँत सामान्य रूपमा हल्लिने स्थितिमा हुन्छन् । दैनिक आफ्नो जिब्रोले धकेलेर दाँत मिलाउन सकिन्छ । बाङ्गिएका दाँत बेलैमा मिलाइएन भने त्यसले टाउको दुख्नेलगायत समस्या ल्याउँछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १, २०७७, १९:००:००